My freedom: Photoshoot @ Henderson Wave Bridge
Photoshoot @ Henderson Wave Bridge
Photoshoot ဆိုလို့ တမျိုးမထင်ကြပါနဲ့။ ဖတ်ကောင်းအောင် ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတာပါ :P .. ကန်ဒီ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Henderson wave ကို မရောက်ဖူးလို့ သွားလည်ရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာလေးတွေပါ။ တကယ်တော့ အစီအစဉ်မရှိဘဲ သွားဖြစ်တာ။ အဲ့ဒီနေ့က အတန်းမရှိလို့ တနေကုန် ဟင်းချက်.. အ၀တ်လျှော်.. အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်နေတာ ညနေ (၄)နာရီမှ ပြီးတယ်။ အားလုံးပြီးလို့ ရေချိုးပြီးရုံ ရှိသေးတယ်.. သူငယ်ချင်းက ဖုန်းခေါ်တယ်။ "နင် အားလား.. " တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Henderson wave သွားရအောင်တဲ့။ ဒါမျိုးဆို သိပ်တက်ကြွတဲ့ ကန်ဒီက သွားမယ်လို့ ပြောတော့.. သူတို့က (၅)နာရီခွဲ Red Hill အရောက်တဲ့။ ခုပဲ (၄)နာရီခွဲကျော်နေပြီကို။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ကန်ဒီ့ အိမ်နဲ့က Red Hill နဲ့ နီးနီးလေး ဟီး... :P
ကန်ဒီထင်ထားတဲ့ Henderson wave ဆိုတာက တောကြီးလိုမျိုးပေါ့နော်... အဝေးကြီးသွားရမယ်ပေါ့။ တောကြီးထဲမှာ တံတားအရှည်ကြီးရှိတာပေါ့.. အဲ့လိုထင်တာ။ တက်တက်စင်အောင် (စာလုံးမပေါင်းတတ်ပါ) လွဲတာပဲ။ ကားလမ်းမကြီးကို ဖြတ်ပြီး တံတားဆောက်ထားတာ။ အပေါ်ကကြည့်တော့ တမျိုးလှတယ် ^_^
ကန်ဒီ့သူငယ်ချင်းတွေက ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ၀ါသနာပါကြတယ်လေ။ ကန်ဒီက ဓာတ်ပုံရိုက်တာရော အရိုက်ခံရတာရော ၀ါသနာပါတယ်။ သူတို့နဲ့ သွားရင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မရိုက်ဘူး။ သူတို့ရိုက်တာပဲ ခံတယ်။ သူတို့ Camera တွေက ပိုကောင်းတာကိုး.. ဟိဟိ :D
ဒီလမ်းမကြီးရဲ့ဘေး ~~~~ (၀ိုင်းစု သီချင်း :P)
ဒီလိုလည်း ကုတ်ကတ်တက် တတ်ပါတယ်...
ဓာတ်ပုံရိုက်ရမယ်ဆို ညစာပေါင်မုန့်နဲ့လည်း ပြီးတယ်လေ.. :P
ဟိုတလောကပဲ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ "မျက်လှည့်"ဆိုတဲ့ Album အသစ်ထွက်တယ်နော်။ သီချင်းအားလုံးနီးပါး ကောင်းတယ်။ ဒီလင့်ခ်မှာနှိပ်ပြီး သွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ် :D "မျက်လှည့်"ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲမှာ ကန်ဒီ့နာမည်တောင်ပါသေးတယ် :P ။ အဲ့ဒီ Album ထဲက "ဆည်းလည်းသံ" ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ အဲ့နေ့က Photo တွေရယ်.. နောက် သီချင်းနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် တခြား Photo နည်းနည်းရယ်.. ပေါင်းပြီး Video လုပ်ထားတယ်။ သီချင်းကရှည်တော့ (၄မိနစ်ကျော်ကျော်) ဓာတ်ပုံတွေ အတင်းထည့်.... အမြင်ကတ်လောက်အောင်ထည့်မိပါတယ်။ သည်းခံကြပါ.. ဒါတောင် ထပ်နေသေးတယ် :P
ကဲ.. အသင့်ဖြစ်ပြီဆို သက်တောင့် သက်သာထိုင်.. တစ်ခုခုကို မှီ.. ပြီးရင် Play Button ကို နှိပ်လိုက်တော့... (မျက်စိမှိတ်ချင် မှိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သီချင်းလေးကိုသာ အပြည့်အ၀ခံစားနော်... အားလုံးကို Weekend မှာ Relax ဖြစ်စေချင်လို့ :D )
Photo - AK & WLA
Camera - Canon EOS 550D & Canon EOS 60D
Labels: Modeling, Songs, Travel & Event
အဲ.စာသားလေးကိုတော. အကြိုက်ဆုံးဘဲ။ ပုံတွေလည်း မိုက်တယ်နော်။
အဲဒီနေရာတော့ မရောက်ဖူးသေးဘူး... ဓါတ်ပုံတွေ မထပ်အောင် ပြန်လုပ်ပေး.. ဟီးဟီး... Good Job Nice Photo slide video.. Cheers :P
အဲဒီသီချင်းရဲ့ အလိုက်က I can hear the bells [from 'Hairspray' movie]
သီချင်းရဲ့ ခြေဆင်းကတည်းက သိသာတာ...
ကိုယ်လဲ အပြင်သွားရင် ဖိနပ်စီးဖို့သာမေ့ရင်မေ့မယ် ကင်မရာတော့ပါအောင်သယ်တယ် :P
play button ကိုနှိပ်ဖို့နေနေသာသာ
relax တော့ဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်းP
ကန်ဒီရေ... အဲလိုအမြဲတမ်းပျော်ရွင်စွာ နေနိုင်ပါစေကွယ်..
super super like :D
နာလည်း စာပြန်ရေးရတော့မယ် :)
တစ်ခြားအလုပ်လုပ်ရင် စာရေးရတာ မကောင်းလို့ ကွန်ပျူတာ ဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်တော့မယ် :P ကိန်သီ(ထိုင်းဘာသာဖြင့် ကိန်ဆိုသည်မှာ တော်သည် ဟုဆို၏ သီဖြင့် သည်ကို အတိုရေးသည် ။ ။း)တို့ကတော့များ စာတွေတင်လိုက်တာ မနာလိုတောင်ဖြစ်တယ် နာတော့ စီပုံးမှာ အော်မရလို့ ဒီနေရာ လာအော်ရတဲ့ ဘဝ :)
ချောဒယ် လှဒယ် ကန်ဒီရယ်
ပုံ/ဒီနေ့ အန်တီတင့်အိမ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ဘကြီး.....
အိမ်း ဒီလောက်အရိုက်ခံချင်တဲ့ ငပေါမလေးတော့ တွေ့မှကို မှတ်လောက်သားလောက်အောင်ရိုက်ပေးရမယ်...head shot ချည်း အချက်သုံးဆယ်လောက်...
သူ့ပုံတွေကြည့်မိမှပဲ ငယ်ငယ်က အဲဒီလို ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက် မပေါခဲ့ရဘဲ အသက်ကြီးလာတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားမိသွားတော့ရဲ့...ကျွတ်စ်ကျွတ်စ်( ဘိုသံလေးပေါက်အောင်...)
ပြန်မှ ပေါဓာတ်တွေ ကူးကုန်ပြီ...
ဟင်းးးး ပဲကတော့ အပြည့်ဘဲဟေ့... ငါ့ညီမကတော့...